Guddiga doorashada M/weynaha KGS ayaa iska dhex doortay Guddomiye iyo ku-xigeen iyo… – Hagaag.com
Guddiga doorashada M/weynaha KGS ayaa iska dhex doortay Guddomiye iyo ku-xigeen iyo…
Posted on 19 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo, ayaa sheegaya in maanta kulan ay yeesheen guddiga qaban qaabada doorashada Koofur Galbeed.
Kulanka, ayaa ujeedkiisa ahaa sidii loo dooran lahaa gudoonka guddiga doorashada Madaxweynaha, maadaama uu meesha ka baxay gudoonkii hore, Kuwaasoo isu casilay cabasho ay ka keeneen faragelin ay sheegeen in doorashada ku heyso dowlada dhexe.
Guddiga doorashada, ayaa maanta Gudoomiye, Kuxigeen iyo xoghayaha Guddiga doortay, waxeyna shaaciyeen in la dardar galin doono howlaha doorashada ee Guddiga.
Gudoomiyaha Guddiga doorashada waxaa loo doortay Xildhibaan Shaacir Cumar Beyle,halka Guddoomiye ku xigeen loogu doortay Abuukar Xuseen Xasan,waxaana Xoghaynta Guddiga loo doortay Xildhibaan Nuur Ibraahim Cusmaan.
Xildhibaan Shaacir Cumar Beyle gudoomiyaha guddiga, ayaa goobta ka sheegay in doorashada ay u dhaceyso si cadaalad, isagoo meesha ka saaray wararka la xiriira in doorashada waqtigeeda ay dib uga dhaceyso.
Si Kastaba, Guddigan doorashada, ayaa heysta mudo kooban, maadaama doorashada xiliga lagu balamay ay ka harsan tahay oo kaliya 8 Cisho.